Hello Nepal News » बार्सिलोनाका अल्बा घाइते : कति खेल गुमाउँछन् ?
बार्सिलोनाका अल्बा घाइते : कति खेल गुमाउँछन् ?
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका डिफेन्डर जोर्डी अल्बा घाइते भएका छन् । क्लब बार्सिलोनाले उनको स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्टबारे जानकारी दिँदै स्पेनिस खेलाडी हार्मस्ट्रिङ इन्जुरीबाट पीडित भएको पुष्टि गरेको छ । अल्बाको दाहिने खुट्टामा चोट परेको छ
ला लिगामा गत राति लिगको तेस्रो खेल आफ्नो घरमा सेभिल्लाविरुद्ध खेल्नेक्रममा अल्बा घाइते भएका थिए । उनलाई ७५औं मिनेटमा मैदानबाट निकालेर उनको स्थानमा नयाँ खेलाडी सेर्जिनो डेस्टलाई डेब्यु गराइएको थियो ।
क्लब बार्सिलोनाले अल्बा कहिलेसम्ममा फिट हुन्छन् भन्नेबारे खुलाएको छैन । अल्बाको रिकभरी क्षमतामा सो कुरा भर पर्ने क्लबले जनाएको छ । यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेक रहेकाले फेरि क्लब फुटबल सुचारु हुँदा अल्बाले दुई खेलसम्म गुमाउने सम्भावना छ । यस्तो केसमा खेलाडीलाई पूर्ण रूपमा रिकभर हुन दुईदेखि तीन सातासम्म लाग्न सक्छ ।
बार्सिलोनाले आगामी खेल अक्टोबर १७ तारिखमा ला लिगामा अवे मैदानमा गेटाफेसँग खेल्नेछ । त्यसपछि अक्टोबर २० मा च्याम्पियन्स लिगमा समूह चरणको पहिलो खेल खेल्नेछ । अल्बाले यी दुवै खेल गुमाउनेछन् । उनले अक्टाबेर २४ मा रियल मड्रिडविरुद्ध हुने खेलबाट कमब्याक गर्न सक्नेछन् ।
प्रकाशित मिति १९ आश्विन २०७७, सोमबार १२:२०